Heveriko fa tsy hoe mitady vola ny marketing | Martech Zone
Alarobia, Septambra 5, 2018 Douglas Karr
Raha misy teny roa hitako amin'ity indostria ity izay mahatonga ahy hisento sy handeha, dia io ilay andianteny manao vola. Tsy te hiditra amin'ny politika tato ho ato aho, fa nisy orinasa iray nanapa-kevitra ny hanao fampielezan-kevitra mampiady hevitra mampiady hevitra. Ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko dia nanambara fa varotra mamirapiratra izany satria hahatonga azy ireo ho iray taonina.
Jereo, orinasa izy ireo ary afaka manao izay tiany amin'ny marketing. Ary ny fitsambikinana amin'ny resabe malaza dia mety ho an'ny eyeballs ary na dia famantarana famantarana dolara aza. Fa tsy mino aho fa ny hahazoana vola no tanjon'ny marketing. Niasa tamina orinasa marobe aho fa hitady vola avokoa, ary na mijaly na maty izy ireo - satria ny fahazoana vola no metrika lehibe indrindra.
gazety - Niasa tamin'ny gazety izay nanana ampihim-bolan'ny dokam-barotra aho ary nanohy nampidina ny tahan'izy ireo. Ny vaovao dia nanjary ny "mpameno eo anelanelan'ny doka". Rehefa tonga ny fifaninanana an-tserasera, tsy afaka niandry ny hitsambikina ny mpanjifa sy ny mpanao dokambarotra.
SaaS - Niasa ho an'ny sasany amin'ireo lozisialy lehibe indrindra amin'ny maha-mpanome serivisy ato amin'ity orinasa ity aho. Tao anatin'ny zotom-pon'izy ireo handresy ny tanjona isam-bolana dia nijery azy ireo aho nanala baraka ny mpanjifa ary avy eo nihazakazaka ho an'ny mpanjifa manan-danja kokoa. Rehefa nandefa ny fanombohana ho avy ny mpanorina dia tsy namaly ny telefaonin'izy ireo ireo mpanjifa taloha ireo. Ary rehefa hita ny vahaolana vaovao dia nifindra monina ny mpanjifa hadino.
Tanjona mandritra ny fotoana fohy ny fahazoana vola izay mifantoka amin'ny zava-drehetra ilaina amin'ny fananganana orinasa miroborobo. Ny vola no atakalo ny orinasa sy ny mpanjifany amin'ny sanda entin'izy ireo. Kritika ny vola - andoavam-bola be loatra ary mety hahatsapa ho voaviravira sy hiala ny mpanjifanao. Raha tsy mandoa vola be ianao dia mety tsy ho afaka hanompo tsara ny mpanjifa. Miovaova ny vola… fa ny fananganana fifandraisana matanjaka no tena manakiana.
Ny marketing dia mitana andraikitra amin'ny fiezahana hitady, hamantatra ary hikendry ireo mpanjifa ho avy mila ny vokatrao na serivisinao ary izany dia toa ny mpanjifanao tsara indrindra. Isan-kerinandro dia miala amin'ny fifanarahana izay tsy inoako fa mety miasa miaraka amin'ny orinasa aho. Ny orinasa sasany aza sosotra fa tsy hanampy azy ireo - saingy fantatro fa ny tanjona fohy an'ny manao vola saika nanimba ny orinasako taloha. Rehefa nahita ny mpanjifa mety aho, niandry tamim-paharetana hiara-hiasa amin'izy ireo, nametraka antenaina mifanaraka amin'izany ary natoky aho fa mila sy maniry ny vokatrao sy ny serivisiko… tamin'izay no nanorenanay fifandraisana.
Mamelà ahy hametraka ohatra roa ao:
Manampy aho a orinasa manangona vola izay miasa amin'ny sekoly izao. Nahazo fitomboana tsy nampoizina izy ireo tao anatin'ny roa taona lasa izay nanampiako azy ireo - saingy satria nifantoka tanteraka tamin'iza ny sekoly tokony hiarahan'izy ireo. Tsy azon'izy ireo atao ny miasa any an-tsekoly izay mety hiteraka fifandirana eo amin'ny mpianatra ny vokatr'izy ireo… ary kosa, manohana ireo sekoly ireo amin'ny alalàn'ny filantrany izy ireo. Afaka mahazo vola ve izy ireo amin'ny fivarotana amin'izy ireo? Mazava ho azy… saingy fantatr'izy ireo fa tsy tombontsoan'ny sekoly izany.
Manampy aho a orinasa foibe data iza no manavao sy mahaleo tena. Afaka mahazo vola izy ireo amin'ny fivarotana firaketana kely mandritra ny taona… dia mahasoa kokoa izy ireo amin'ny fotoana fohy. Na izany aza, fantatr'izy ireo fa ny mpanjifa lehibe sy orinasa manana fanamby amin'ny fanarahan-dalàna no ahiratan'izy ireo. Noho izany, mivarotra amin'ny orinasa lehibe izy ireo ary tsy manao marketing amin'ny orinasa kely.
Manampy aho a serivisy an-trano orinasa manao tafo, siding ary serivisy ivelany hafa. Orinasam-pianakaviana izy ireo izay efa ho 50 taona teo amin'ny fiaraha-monina. Ny fifaninanana ataon'izy ireo dia manome toky ary mamela ny lalan'ny fifanarahana mahatsiravina amin'ny alàlan'ny fampiasana varotra mavesatra ary manosika ny mpanjifa tsirairay hanakatona na hiakatra. Misafidy ny handeha lavitra ireo fifampiraharahana ireo ny mpanjifako ary, kosa, mivarotra amin'ireo namana, fianakaviana ary mpiara-monina amin'ny mpanjifany.
Manampy aho a fitsapana rano orinasa izay ny tanjona voalohany dia ny hanampy ny mpanjifa hitsapa ny kalitaon'ny rano amin'ny kitapo an-trano. Na izany aza, hitan'izy ireo ny olana iray lehibe kokoa izay tsy misy rindrambaiko fanarahan-dalàna hanarahana ny lalàna mifehy ny faritra, fanjakana ary federaly ny Kaominina. Fantatr'izy ireo fa afaka mitondra fiatraikany bebe kokoa amin'ny tanjon'izy ireo izy ireo amin'ny fanampiana ny fanovana ny kalitaon'ny rano ao amin'ny firenena raha toa izy ireo ka mifantoka amin'ny fifandraisan-davitra ataon'ny governemanta.
Amin'ireo tranga rehetra ireo dia tsy mitady izany izahay mahazo vola. Ny ezaky ny varotra ataonay dia ny manatsara sy mampifanaraka ny vokatra sy ny serivisy ananan'ireo orinasa ampianay amin'ireo mpanjifa ho avy azon'izy ireo aroso. Ireo orinasa rehetra ireo dia manana fitomboana lehibe, saingy satria fantatr'izy ireo hoe rahoviana izy ireo no tokony hiala amin'ny fitadiavam-bola… fa tsy hanaraka azy.
Izay mpivarotra rehetra dia afaka manampy orinasa iray mahazo vola. Vitsy ny mpivarotra manampy ny orinasa hiroborobo sy hitombo amin'ny mpanjifa mankasitraka ny vokatra sy serivisin'izy ireo. Nandritra ny folo taona lasa niaraka tamin'ny orinasako manokana dia hitako fa ny vola dia vokatry ny fitadiavana sy fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa mety. Ny varotra ataoko dia ny mahita ireo orinasa ireo fa tsy mitady sy mitady vola. Manantena aho fa izany koa no hifantohanao.
Tags: manao vola-barotrany vola